Dhibaato wadashaqayn oo ka dhextaagan boliiska iyo isbitaalada dhimirka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Dhibaato wadashaqayn oo ka dhextaagan boliiska iyo isbitaalada dhimirka
Wadashaqaynta boliiska iyo isbitaalada dhimirka oo liidata.
La daabacay fredag 26 juli 2013 kl 13.13
Muddo dheer waxaa dhibaato ka taageyd wadashaqaynta boliiska iyo isbitaalada lagu daryeelo dadka dhimirka wax uga dhiman yihiin marka laga hadlaayo arrimaha gacansiinta. Isbitaalada lagu daryeelo dadka dhimirka la’ waxay boliiska ka codsan karaan haddii ay u baahdaan in ay gacan ka siiyaan kaxaynta bukaanka, halka boliisku ku doodayo in gargaarka ay fidiyaan si qaldan muddo loo isticmaalayey. Dhanka kale Christer Andersson oo ah dhakhtar ka hawlgala isbitaal ku yaal xaafadda Bergsjön ee magaalada Göteborg ayaa wax ka yiri habka gacansiintu ku dhacdo:
- Waxaa dhici kara in uu jiro qof maanka ka xanuunsan oo u baahan in khasab lagu daaweeyo, maadaama aan keligiis la siin deyn karin, uuna khatar ku noqon karo naftiisa iyo tan dadka kale. Kolkaas boliisku waxay noo sheegaan in diyaar yihiin oo ay sugayaan in aan ambalaas diyaarinno, ayuu sheegay Christer Andersson.
Kolkaas shaqaalaha ambalaasta ayaa diidey in ay qofkaas kaxeeyaan maadaama ay ku arkaan in aysan jirin baahi loogu baahnaan karo ambalaas. Boliiskii goobta joogeyna wuxuu sheegay in ay diyaar u yihiin in ay gacansiiyaan, laakiin gaadiidka lagu kaxaynayo qofka bukaanka ah uu mas’uuliyaddeeda saaran yahay goobaha daryeelka caafimaadka. Ugu dambeeyey waxaa lagu heshiiyey xal meel dhexe la isugu yimid.
- Qofkii bukaanka ahaa waxaa ku qaadnay baabuurkayga gaarka ii ah oo aniga iyo xoghayahaygu shirka wada fadhinno. Qofkii bukaanka ahaana wuxuu fadhiyey xagga dambe oo albaabada ammaanka lagu xiray. Waxaana na dabasocdey ciidamada ilaa aan ka gaarno isbitaalka dhimirka, ayuu yiri Christer Andersson.
Waxaa dalka ka jira sharci ku saabsan in dadka maanka ka xanuunsan khasab lagu siin karo daryeelka caafimaad. Sharciganina wuxuu qorayaa in ay shaqada boliiska ka mid tahay in ay gacan siiyaan haddii dhakhtar ka codsado. Boliiska kolka waxay baaritaan ku sameeyaan in arrinta laga codsaday ay buuxineyso shuruudaha gacansiinta, laakiin qiimeyn kuma samayn karaan baahida loo qabo gacansiinta.
Erik Nord oo ah madaxa hawlgalada boliiska gobolka Västra Götaland waa uu ka gaabsaday in uu ka faalloodo maadaama uusan waxba kala socon arrintaan ka dhacday Göteborg. Wuxuuse intaas ku daray sida ay boliis badani qabaan in sanooyin badan si qaldan loo isticmaalayey gacansiinta ay fiidiyaan.
- Mararka qaarkood waxaan dareennaa in naloo soo dalbado sidii inaan nahay xarun gaadiidka laga dalbado. Waxaa mooddaa in la caadeystey in aan diyaar u nahay wadashaqayn mar walba oo naloo yeertaba. Kolkaa waxaa dhici kara in laga weecdo wixii markii hore laga habkaan gacansiinta, ayuu yiri sarkaalkaan boliiska ah ee Erik Nord.
Dhanka kale, sannad walba waxay boliisku gacan ka geystaan 23000 oo dhacdo oo noocaan ah. badankoodna waxaa naga codsada isbitaalada ama xafiisyada gargaarka bulshada oo aan iyadoo awoodin in ay keligood kaxeeyaan dadkaan maanka ka xanuunsan. Qoraal uu soo saaray Hoggaanka sare boliiska dalku waxaa ku qoran in uusan boliisku awood u lahayn in uu qiimeeyo codsi lagu doonayo gacansiin haddii aysan ahayn mid ku salaysan go’aan rasmi ah. Laakiin waxaan qoraalka hoggaanka sare ee boliiska ku qanacsanayn Erik Nord oo u arka in ay khasab tahay in uu boliisku qiimeeyo habka gacansiinta loo fulinayo isagoo kaashanaya hay’adda ka codsatay gacansiinta.